Daawo Qaabkee ugu wanaagsan ee aad u dhaqdhaqaaqi xilliga foosha? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Daawo Qaabkee ugu wanaagsan ee aad u dhaqdhaqaaqi xilliga foosha?
Daawo Qaabkee ugu wanaagsan ee aad u dhaqdhaqaaqi xilliga foosha?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 22-08-16 7:31 AM Waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay oo aad ka fikirayso maalinta dhalmada iyo dareenka xiliga foosha gaar ahaan hadii aad tahay ugub.
Fooshu waxay u qeybsantaa 3 qeybood oo kala ah:
Qeybta koobaad: waxaa bilaabanaya inaad dareento fool taasoo ay sababayso isbedel ku imaanaya ilmo galeenka, si buuxda u furmayaa ilmo galeenka. Heerkaan foosha waxaa loo kala qaadaa laba qeybood oo kala ah:
Fool jajabow: ilmo galeenka si tartiib ah ayuu u furmaa. 10 ama 15 kii daqiiqaba mar ayay timaadaa foosha hooyooyinka ilmaha horay usoo dhalay..gabdhaha ugubka ahna 20 kii daqiiqaba mar, way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa.
Foosha firfircoon: Waa fooqabasho ka adag tii hore. Hadii uu kugu jiro shaki ah inay ku hayso foosha firfircoon waxaa muhiim ah inaad dhakhtarkaaga la xiriirtid.
Qeybta Labaad: Waa marka ilmaha soo baxayo, qeybtaan waxaa loo yaqaan marxalada “riixitaanka”.
Qeybta saddexaad: waa marka ilmuhu dhasho.
Maroojinta: Xanuunka foosha ayaa sii badanaya, waqtiyo isdaba joog ah ayuu imaanayaa.
Dilaaca xuubka: biyo ayaa kasoo burqanaya waxaana keenaya kiish dheecaan ah oo ilmaha ku hareeraysan oo dilaacaya.
Halkaan kaa daawo qaababka fiican ee dhaqdhaqaaqa xiliga foosha: